Filed under: ကဗျာလေးတွေ, ဝတ္ထုတို — 17 Comments
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဩော်….. မစွမ်းမသန်ဘဝနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် အရွယ်ရလာရင် သူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေမှာ၊ သူ့အတွက်နဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေပါ ဒုက္ခရောက်ကြရမှာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အခုလိုသူ့စရိတ်သူစားသွားတာကပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ်လို ဖြေတွေးလေးတွေးလိုက် ကြတော့တာပါပဲ။
>လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ဝန်ထမ်းများရဲ့ တကယ့်ဘဝစစ်စစ်တွေကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးနိုင်တာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။
>အင်း…ဟုတ်တယ်အကိုလင်း၊ ဒါမျိုးတွေက ဟိုတုံးကလည်းဖြစ်တယ်၊ အခုလဲဖြစ်နေတာပဲလေ..။ ဟိုတုံးက လို့ ပြောပြီးအခု မရှိတော့ ဘူးလို့ တော့မထင်နဲ့ လေ၊ အခုမှ ပိုဆိုး။အပစ်က ခေတ်ကိုပဲ ပုံချရမလား၊ အချစ်ကိုပဲ ပုံချရမလား၊ခေတ်ကြောင့် ရော မချစ်ရတော့ ဘူးလား..။ဒီပို့ (စ)လေးက တွေးစရာတွေ အများကြီးပါ။
>သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့ စ်လေးဘဲအစ်ကို ၀မ်းနည်းဖို့ တော်တော်ကောင်းပါတယ် . . . ဒီလိုလူမသိသူမသိအဖြစ်မျိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ် ခုလည်းရှိနေမှာအသေအချာပါဘဲဗျာ . . .အဲလိုဘ၀မျိုးတွေကို အနည်းနဲ့ အများ ( အုတ်တချပ် သဲတပွင့်လောက် ) ကူညီရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျေနပ်မိမှာပါလဲနေသူထူပေးဖို့ ကိုယ်ကတိုင်လည်း ခနော်နီခနော်နဲ့ လဲကျခါနီးလူမဖြစ်တော့လိုတာပေါ့ဗျာ ဒါမှလည်းအနည်းဆုံးအုတ်တချပ်သဲတစ်ပွင့်တော့ကူညီနိူင်မှာပါ . . . ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ထားတယ်ဗျာ တချိန်ချိန်တော့ကူညီကိုကူညီနိူင်ရမယ်ဗျာ
>အဲဒီလို မပြည့်စုံတဲ့ဘဝကို အရမ်းတွေးပူရင်း အပျိုကြီးစာရင်းဝင်လာခဲ့ပါပေါ့လား..။လူ့ဘဝဆိုတာ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနိုင်ဖို့လိုပေမယ့် မပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့ မတင်းတိမ်နိုင်ပေါင်..။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင် ကျိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်..၊ ဖြစ်လာတာ/မလာတာကတော့ ကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်၊ ကျိုးစားဖို့ကတော့ ကိုယ့်တာဝန်ပေါ့..။သားသမီးကို ပြည့်စုံအောင်မထားနိုင်တဲ့ တာဝန်မကျေတဲ့ မိဘမျိုးတော့ ဘယ်တော့မှအရောက်မခံဘူး..။ဆေးပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ “အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပဲ မွေးလိုက်ရတယ်” ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးပေးမယ့်အစား..“ဆင်ချင်လို့ရတဲ့ နည်းတွေ”နဲ့ ကာကွယ်သင့်တာပေါ့..။သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးတခုပါပဲ ကိုချမ်းလင်းနေရေ..။
>ဖတ်ရတာ ရင်နဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်.. စိတ်မကောင်းဘူးလစာနည်း ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ဘ၀ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်စေတယ်.။.ဒီလိုအဖြစ်တွေ အများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့လည်း သဘောပေါက်မိတယ်.. စာရေးကောင်းတယ် ကိုချမ်းရေအားပေးပါတယ်.. အများကြီးရေးပါဦးနော်
>ဇာတ်လမ်း အစကနေ ဖတ်လိုက်တာ အဆုံးထိ တောက်လျှောက် မျှောပြီး ပါသွားတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုကို အပြင်မှာ မြင်နေရတဲ့အတိုင်း ရေးဖွဲ့အား ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။
>၀တ္ထုတိုလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ သနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ။ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပါစေ။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေ အဖြစ်ဆိုးတွေမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
>အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ စာပဲဗျာ။အရေးသွက်သွက်နဲ့ ခပ်တိုတို ဝါကျတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားလို့ ပိုပြီးတော့ ရုပ်ကြွလာစေတယ်။ကောင်းတယ်ဗျာ။
>ရေးတဲ့သူက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလိုမျိုး ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့သူက နင့်နင့်နဲနဲဖြစ်သွားတယ် အကိုရေ..တကယ့်ဘဝတွေက အခုထက် ပိုအခြေအနေဆိုးတာမျိုးတွေ တပုံတပင်.. 😦
>စိတ်မကောင်းစရာပဲ နော် ၀န်ထမ်းတွေက အခက်အခဲတွေ ပိုများသလိုပဲ . .
>ရင်ထဲကို ထိမှန်စေတဲ့ စာသားလေးတွေပါ။ ဆောင်းပါးလေးကို ကဗျာပြန်ဖွဲ့ထားတာ အခါခါဖတ်နေမိရင်း ရင်ထဲမှာ သနားတဲ့စိတ်တွေ ယိုစီးကျလာပြီဗျာ။
>Nice Post.. make me really sad..
>ရင်နင့်အောင်မမွှေးတဲ့ ဘဝဖြစ်မှန်တွေကိုရင်နင့်အောင်ရေးနိူင်တဲ့ ကိုချမ်းလင်းရေ ။ ဈာပန ပွဲတောင် မလုပ်ပေးနိူင်တဲ့ မိဘတွေ ဘယ်လောက်များများရှိနေအုံးမလည်း လို့ တောင် မတွေးရဲတော့ပါဘူး ..ခင်တဲ့ မကိ